Bhuku reRudo Rwakanaka: chinyorwa chekare chezvinyorwa zveSpanish | News Literature
Bhuku reRudo Rwakanaka (1330 na1343) isanganiswa yakagadzirwa naJuan Ruiz, akashanda seArchpriest weHita muzana ramakore rechigumi nemana. Iri basa - rinozivikanwawo se Archpriest's Book o Bhuku renziyo- Inoonekwa seyemhando yepamusoro yezvinyorwa zvechiSpanish. Maumbirwo ayo akakura, ane nhanho dzinopfuura 1.700 umo nganonyorwa yenhoroondo yemunyori inorondedzerwa.
Kune manyoro matatu ebhuku racho—S, G uye T—asina kupera. Pakati peizvi, "S" kana "Salamanca" ndiyo yakakwana, asi mamwe anongova nezvidimbu zvebasa. Saizvozvowo, kusikwa kwayo kunopa mazuva maviri: 1330 uye 1343; Hunyambiri uhwu hwakakonzerwa nemagwaro ekutanga akawanikwa. Iyo "S" vhezheni (1343) idzokororo ye "G", iyo yakawedzerwa nziyo itsva.
1 Ongororo yeBhuku reRudo Rwakanaka
1.1 Nhanganyaya yebasa
1.3 Kufambidzana kwaDon Melón kuna Doña Endrina
1.4 Adventures muSierra de Segovia
1.5 Makwikwi pakati paDon Carnal naDoña Cuaresma
1.6 Nyaya dzekupedzisira dzerudo dze Archpriest
2 Nezve munyori: Juan Ruiz, Archpriest weHita
2.1 Gakava pamusoro peguta rake
Analysis of Bhuku reRudo Rwakanaka
Ichi chikamu chezvinyorwa chakanyorwa neprose - kusiyana nemamwe ose ebasa. Pano, munyori akataura zvinangwa zvebhuku uye kududzira kwaro kunobvira. Akataura zvakare kuti yakagadzirwa kubva kujeri. Pane izvi, vaongorori vakawanda vanofunga kuti yakanga iri fananidzo, sezvo isingatauri nezvejeri rechokwadi, asi inoreva hupenyu hwepanyika.
Munyori anotanga chinyorwa nekuva nechichemo naDon Amor.Pakutanga, akamupomera mhosva yezvivi zvakakura. Chii chimwe, Akataura kuti rudo runoparadza, sezvo runopengesa varume, saka akakurudzira kubva panzvimbo yarwo. Kuti atsanangure maonero ake, Archpriest akashandisa nyaya dzakawanda, pakati pavo akarondedzera "Mbongoro nebhiza", semuenzaniso wekuzvikudza kwevanhu.
Kune rumwe rutivi, Don Amor akapindura nekumupa dzidziso. Nokuda kweizvi akashandisa Ovid uye kugadzirisa kwe shanda kubva kuMiddle Ages: Ars Amandi. Mumhinduro yake, akatsanangura kuti mukadzi akakwana anofanira kuva sei uye kunaka kwaanofanira kuva nako masikati nousiku. Pamusoro peizvi, akamunyengetedza kuti atsvage "matchmaker" - nyanzvi yekugadzira mishonga yerudo - kuti amupe mazano.
Bhuku rakanaka rerudo ...
Kufambidzana kwaDon Melón kuna Doña Endrina
Ndiyo nyaya huru yebhuku. Mariri, Ruiz akagadzirisa komedhi yepakati kubasa rake: Pamphilus (XII remakore). Rondedzero iyi iri mumunhu wekutanga uye ine sevanopikisa mavara ambotaurwa: Don Melón naDoña Endrina.. Mukurangana kwacho, murume wacho akatsvaka chipangamazano akwegura—Trotaconventos—kuti akunde mukadzi aitaurwa nezvake.
Zvakakosha kuziva kuti, kunyangwe rudo rwenyama rune basa rakakosha, kakawanda nongedzero inoitwa pakukosha kwazvakaita kuva pedyo norudo rwaMwari.
Trotaconventos akapinda muchiito, akatsvaga Dona Endrina ndokumuita kuti asangane naDon Melon kumba kwake kwekare. Pavakasangana, zvinofungidzirwa - nekuda kwekushaikwa kwemapeji ezvinyorwa - kuti vaive nehukama hwepedyo.
Zvakanga zvakaita seizvi -Pamutengo wekunyengera nemisungo- pakupedzisira muchato wakabvumirana Pakati pese. Zano romupi wezano rakanga rakapfava, asi richishanda: nzira bedzi yokubvisa rukudzo rwomukadzi yakanga iri kupfurikidza neroorano.
Adventures muSierra de Segovia
Iyi ndiyo imwe yenyaya dzakatanhamara dzeArchpriest. Pano anorondedzera kufamba kwake nomuSierra de Segovia, kwaakasangana nevanhu vomutaundi maduku vakati wandei. Wekutanga aive "La chata", mukadzi anohura asina kana nyadzi. Zviri pachena, aiwanzokumbira zvipo achichinjana nemaitiro epabonde. Neunyanzvi, murume wacho akakwanisa kutiza kubva kune iyi uye vamwe vakadzi vaduku kubva kuSomosierra.
Ari munzira kutiza, akawana rimwe gomo mujinga megomo. Mukadzi uyu akanga ari "barbaric" kupfuura vamwe. Archpriest akakumbira hupoteri, uye, mukudzoka, akamukumbira kuti amupe muripo —Dzepabonde kana kuti zvinhu. Nguva ino, murume, nenyadzi nehadzi inoshamisira, akabvuma uye ndinobvumirana chikumbiro.
Makwikwi pakati paDon Carnal naDoña Cuaresma
Mushure medzimwe nziyo kuMhandara - nekuda kwekuswedera kweVhiki Dzvene - ngano yekufungidzira nezvehondo pakati paDon Carnal naDona Cuaresma inoratidzwa. Pano, munyori anoratidza kusawirirana kuripo pakati pezvishuwo zvenyika nekunamata. Chinyorwa chacho chinorondedzerwa separody uye chinotuswa nenziyo dzekare dzechiito.
Don Carnal akaunganidza yakasimba uye asingarovi Mauto. Zvisinei, kuravira kweboka rake chikafu uye waini yakagadzirwa akaenda akashata kunhandare yehondo. Izvozvo zvakabvumira kutarisana kuti kuve kwakadzikama, uye Mai Rende akashandisa zvakanyanya mukana uye akawana kukunda. Paakangokundwa, Don Carnal akatorwa semusungwa uye chirango chakaomarara chakaiswa paari.
Nyaya dzekupedzisira dzerudo dze Archpriest
Archpriest haana kuzorora mukutsvaga rudo, Akaedza uye akaedza kuzviita mune mamwe akawanda ezvinoitika. Mune ose akakumbira Trotaconventos rubatsiro zvakare. Imwe yemazano emudhara wechembere yaive yekudanana nechirikadzi, zvisinei, mukadzi airemekedzwa haana kunyatsogutsikana uye murume akatadza. Mushure maizvozvi, protagonist akaedza nemuridzi, asi haana kubudirira kana.
Ipapo Trotaconventos akakarakadza kuti aifanira kuedza sisita ainzi Garoza. Archpriest akaedza kumuita kuti ade murudo, asi mukadzi akanamatira kumhiko dzake dzaMwari uye achangofa. Murume wacho akaenderera mberi nezviitiko zvake, uye mushure mokunge agumburwa zvakanyanya, akakwanisa kushamwaridzana neblackberry.
Nguva pfupi mushure mekukunda kupfupi ikoko, mutambi akafa. Kurasikirwa ikoko, hongu, kwakakanganisa zvikuru protagonist. Mushure medzimwe nziyo dzemhandara uye mitambo yaMwari. Archpriest akapedza bhuku nokupa zvakare mirayiridzo kuzvidudzira sei.
Nezve munyori: Juan Ruiz, Archpriest weHita
Juan Ruiz aive muchechi uye mupriste mukuru weHita - maneja weSpain mudunhu reGuadalajara. Iyo data pamabviro ayo uye hupenyu ishoma, izvo zvishoma zvinozivikanwa zvinotorwa kubva muiri basa rimwechete: Bhuku reRudo Rwakanaka. Zvinofungidzirwa kuti akazvarwa muna 1283 muAlcalá de Henares uye akadzidza muToledo, Hita - kwaakaberekerwa - kana nharaunda iri padyo.
Uyewo Zvinofungidzirwa kuti aive neruzivo rwakakosha rwemumhanzi, izvo zvinoratidzwa mune yake chaiyo lexicon panyaya iyi. Vamwe vanofungidzira - by the Manyoro eSalamanca- kuti akasungwa nemirairo yaArchbishop Gil de Albornoz, kunyangwe vatsoropodzi vazhinji vakasiyana nedzidziso iyoyo. Maererano nemagwaro akasiyana-siyana, zvinofungidzirwa kuti rufu rwake rwakanyorwa mugore ra1351; Panguva iyoyo akanga asingachashandi seMuprista Mukuru weHita.
Gakava pamusoro peguta rake
The medievalists Emilio Sáez naJosé Trenchs vakasimbisa kuCongress yegore ra1972 kuti taundi rokumusha kwaJuan Ruiz raiva Alcalá la Real—Benzayde (1510c) -. Vakataurawo kuti akapedza makore angangoita gumi ehudiki hwake munzvimbo iyoyo. Ruzivo rwese urwu rwakaunganidzwa mushure mekuferefetwa kwenguva refu nenyanzvi; zvisinei, chidzidzo ichi hachina kukwanisa kupedzwa nekuda kwekufa kusingatarisirwi kwevose vari vaviri.
Kune rumwe rutivi, munyori wenhau dzakaitika wokuSpain Ramón Gonzálvez Ruiz akataura zvinotevera mumusangano weplenary muna 2002: “Mubhuku rake rose Juan Ruiz anga achidyara data kubva munhoroondo yehupenyu hwake. Anofanira kunge akaberekerwa muAlcalá, sevhesi yakakurumbira iyo Trotaconventos inomhoresa iyo blackberry inoratidza Pachinzvimbo chemupristi mukuru: "Gadzirisa, mumwe anobva kuAlcalá anokukwazisa kwazvo" (stanza 1510a) ”.
Kubva nhasi, hapana padzidziso mbiri idzi dzakasimbiswa neinobuda pachena, uye maguta ese ari maviri achiri kurwira kuti azivikanwe.. Nekudaro, vazhinji vanorerekera kune Gonzálvez Ruiz hypothesis, kubvira Alcalá de Henares (Madrid) idunhu riri padyo neHita (Guadalajara).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Nhoroondo yezvinyorwa » Bhuku reRudo Rwakanaka
Roberto Lapid. Hurukuro nemunyori wePasión imperfecta